Sawirro: Axmed Madoobe oo kulan deg deg ah isugu yeeray golihiisa wasiirrada - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Axmed Madoobe oo kulan deg deg ah isugu yeeray golihiisa wasiirrada
Sawirro: Axmed Madoobe oo kulan deg deg ah isugu yeeray golihiisa wasiirrada
Kismaayo (Caasimada Online) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa caawa shir gudoomiyay kulan aan caadi ahayn oo ay isugu yimaadeen golaha wasiirrada Jubaland.
Madaxweynaha ayaa golaha uga warbixiyay safarkii uu dhowaan ku tegay magaalada Muqdisho oo uu kaga soo qeybgalay doorashada Madaxweynaha JFS iyo xaalada guud ee dalka.
Qoraal kooban oo lagu baahiyey bogga Facebook-ga ee Madaxtooyada Jubbaland ayaan bixin faahfaahin intaas ka badan, balse xogaha aan ka helnay kulankaas waxay sheegayaan in aad loo gorfeeyey sida gacanta Jubbaland loogu soo celi karo gobolka Gedo.
Dowladii uu hoggaaminayey Madaxweyne Farmaajo ayaa ku dhowaad labo sano gobolka Gedo ka heysatay Jubbaland, waxaana hadda weli ku sugan ciidan ka kala tirsan NISA iyo militeriga Soomaaliya, kuwaas oo ku xiran taliska berri xukunka dalka wareejinaya ee Farmaajo.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo habeen ka hor ka hadlay xaaladda gobolka Gedo iyo qorshaha uga degan dib u hanashadiisa maamulidda gobolkaas ayaa rajo badan ka muujiyey inuu soo cesha karo Gedo.
Khilaafkii kooxda Farmaajo iyo hoggaanka Jubbaland ayaa sababay inay cadaawad xun isku qaadaan beelaha dega gobolka Gedo iyo maamulka Jubbaland ee Axmed Madoobe hoggaamiyo, waxayna inta badan siyaasiyiinta reer Gedo ku goodiyaan in Jubbaland aysan waxaba ku darsa doonin, inta Axmed Madoobe hoggaaminayo.
Axmed Madoobe ayaa habeen hore balan qaaday in maamulkiisu uu qorshe cad ula tegi doono dadka reer Gedo, sida in maamulka degmooyinka aan loo magacaabin ayagu ay soo dooranayaan hadda kadib, inuu gobolka ka hir-gelinayo dib u heshiisiin iyo inuu u fasaxayo dhamaan mashaariicdii horay looga xayiray gobolka Gedo, intii uu jiray khilaafkaan.